Uku ndiko kuziviswa kweApple Watch Series 6 | Ndinobva mac
Uku ndiko kuziviswa kweApple Watch Series 6
Tinogona kutaura zvakawanda nezvake mhando nyowani Apple Watch Series 6 uye isu tinogona kutaura kuti mamodheru apfuura aya idanho pazasi mukuita, asi chaizvo iyo nyowani yeApple Watch Series 6 ndeye shanduko yeavo Apple vanowanzotipa mune idzi kesi, diki asi rakakura shanduko yemhando yazvino.
Ichokwadi kuti kuve neSE modhi uye kuve nemhando dzakapfuura mune zvimwe zvitoro zvechitatu-bato isu tinogona kugara tichifunga nezvekuisa parutivi iyo nyowani Series 6 modhi nekuda kwe "kushayikwa kwemashoko" asi iyi nyowani nyowani ine zvese uye nezvimwe kubudirira. Chiziviso chitsva cheApple chinoburitsa zvimwe zveakanakisa maficha uye musoro wenyaya wayo unokosha chaizvo: "Zvinotoita"
Iyi ndiyo ziviso yepamutemo yeApple Watch Series 6 izvo zvatakaona mukuburitswa kweiyo wachi panguva yechinhu chakakosha uye ikozvino yave kuwanikwa paYouTube kune avo vanoda kuiona zvakare uye kutanga kuitepfenyura kutenderera pasirese.
Sekuwedzera tinogona kuona imwe vhidhiyo paApple yeYouTube chiteshi umo inoratidza simba revanhu kudzidzisa uye kurwira kuti vawane zvavanoda, iyi vhidhiyo inoratidzwa nevanhu vane matambudziko ehutano uye izvo tenda Apple nemabasa eApple Watch:
Zvine musoro kuti chinhu chakakosha ndechekuti uve noutano uye ichokwadi kuti Apple akangwara wachi anogona kukubatsira iwe mune dzakaomarara mamiriro kana akafanana neaya anoonekwa mumavhidhiyo aya. Iwe nguva dzose unofanirwa kuenda kune nyanzvi uye usatarise chete pa "pulsations" iyo iyo chiratidzo inotimaka, asi ndizvo rubatsiro rwakanaka kusimudzira hutano hwedu pasina kupokana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Uku ndiko kuziviswa kweApple Watch Series 6
Mifananidzo yezvingave iyo AirPods Studio Sport
Spotify inotsoropodza Apple One kuvhurwa, ichiti inoshandisa zvisizvo nzvimbo yayo yepamusoro